Shiinuhu Aaladaha Lugeynta iyo Soosaarayaasha Kursiga Curyaanka iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Baxnaaninta iyo Jimicsiga > Gargaarka Socodka iyo Kursiga Curyaanka
Gargaarka Socodka iyo Kursiga Curyaamiinta guud ahaan waxaa loo qaybiyaa laba nooc, is-caawin iyo gargaar, mid ayaa naftaada riixi kara, mid wuxuu u baahan yahay kuwa kale inay ku caawiyaan riixitaanka, waxqabadka gaarka ah ee giraangiraha dambe waa mid weyn iyo mid yar.
Aaladaha lagu socdo iyo kuraasta curyaanka ayaa aad ugu haboon dadka da'da ah. Haddii dadka waayeelka ah aysan awoodin inay is-daryeelaan, waxay dooran karaan kursi curyaan oo yar oo gadaal ah, kaas oo yar oo laalaabi karo oo ku habboon in la geliyo gaariga.
Aidyada socodka iyo kuraasta curyaanka ayaa lagula talinayaa in ay doortaan giraangiraha weyn, wayna ku habboon tahay inaad naftaada riixdo. Dabcan, waxaa jira nooc la casriyeeyay oo suuqa ku yaal, oo leh taayiro waaweyn iyo kuwo yaryar oo la isweydaarsan karo.
Socodka AIDS-ka waxa loo qaybin karaa noocyo aan giraangiraha lahayn, kuwaas oo loo isticmaalo in lagu ilaaliyo dheellitirka jidhka toosan, taageerada miisaanka, socodka tareenka, iyo kor loogu qaado xoogga muruqa. Meesha taageerada ee jir-socodku waa mid weyn, deggan oo ammaan ah. Waxay ku habboon tahay in la istaago oo la socdo bukaannada qaba naafanimo daran oo xagga lugaha hoose ah.
Rollator-ka Socodku wuxuu muhiim u yahay nolol maalmeedka dadka naafada ah. Doorashada lugeeyaha ku habboon waxay u keeni kartaa raaxo weyn dadka naafada ah. Waxaa lagu taageeri karaa qalab waana jimicsi shaqeynaya oo loogu talagalay bukaannada la baxnaaniyo si ay u soo celiyaan shaqada jidhka, nafis xanuunka iyo caawinta baxnaanin. Socodayaashu waxay ku habboon yihiin bukaannada jilicsan, bukaanada waayeelka ah, bukaanada qaba jabka hoose ee lugaha iyo bukaanada leh hal dhinac ama laba geesood oo daciif ah.
Kursiga curyaanka ee gacanta ku laabta
Maalmahan, waxa aad iyo aad u soo badanaya noocyada kursiga curyaanka oo koronto ah oo hawlahoodana waa la kala soocay. Kursiga curyaanka ee korantada ee laablaaban ee fufudud ayaa noqday kuwa ay ugu jecel yihiin dadka da'da ah, haddaba intee in le'eg ayay le'egtahay miisaanka laalaabida fudud ee kursiga curyaanka ee korontada? Ammaan ma u tahay waayeelka inay ku kaxeeyaan kursi curyaan oo koronto ah oo miisaankoodu fudud yahay? Waagii hore, kuraasta curyaamiinta ee korontada ku shaqeeya waxay inta badan isticmaalaan qaab dhismeedka tuubada birta iyo baytariga aashitada rasaasta, markaa miisaanka baabuurku waa weyn yahay, laalaabku maaha mid ku habboon, lama laabi karo kaydinta iyo qaadista. Horumarinta sayniska iyo tignoolajiyada, baahiyaha waayeelka iyo naafada waa la kala duwan yahay, K......
Kursiga Curyaanka ee Gaaban ee Curyaanka ah
Maalmahan, waxa aad iyo aad u soo badanaya noocyada kursiga curyaanka oo koronto ah oo hawlahoodana waa la kala soocay. Kursiga curyaanka ee korantada ee laablaaban ee fufudud ayaa noqday kuwa ay ugu jecel yihiin dadka da'da ah, haddaba intee in le'eg ayay le'egtahay miisaanka laalaabida fudud ee kursiga curyaanka ee korontada? Ammaan ma u tahay waayeelka inay ku kaxeeyaan kursi curyaan oo koronto ah oo miisaankoodu fudud yahay? Waagii hore, kuraasta curyaamiinta ee korontada ku shaqeeya waxay inta badan isticmaalaan qaab dhismeedka tuubada birta iyo baytariga aashitada rasaasta, markaa miisaanka baabuurku waa weyn yahay, laalaabku maaha mid ku habboon, lama laabi karo kaydinta iyo qaadista. Horumarinta sayniska iyo tignoolajiyada, baahiyaha waayeelka iyo naafada ayaa kala duwan, iyo Kursi......
Laalaabida Aluminium Kursiga Curyaanka La Qaadan Karo
Maalmahan, waxa aad iyo aad u soo badanaya noocyada kursiga curyaanka oo koronto ah oo hawlahoodana waa la kala soocay. Kursiga curyaanka ee korantada ee laablaaban ee fufudud ayaa noqday kuwa ay ugu jecel yihiin dadka da'da ah, haddaba intee in le'eg ayay le'egtahay miisaanka laalaabida fudud ee kursiga curyaanka ee korontada? Ammaan ma u tahay waayeelka inay ku kaxeeyaan kursi curyaan oo koronto ah oo miisaankoodu fudud yahay? Waagii hore, kuraasta curyaamiinta ee korontada ku shaqeeya waxay inta badan isticmaalaan qaab dhismeedka tuubada birta iyo baytariga aashitada rasaasta, markaa miisaanka baabuurku waa weyn yahay, laalaabku maaha mid ku habboon, lama laabi karo kaydinta iyo qaadista. Horumarinta sayniska iyo tignoolajiyada, baahida dadka waayeelka ah iyo naafada ayaa kala duwan, iy......
Kontoroolka Fog ee Laalaabida Kursiga Curyaanka ee Korontada Kursiga Curyaanka
Kursiga curyaanka ee korontada ku shaqeeya Maalmahan, waxa aad u soo badanaya noocyada kursiga curyaanka oo koronto ah oo shaqadooduna waa la kala soocaa. Kursiga curyaanka ee korantada ee laablaaban ee fufudud ayaa noqday kuwa ay ugu jecel yihiin dadka da'da ah, haddaba intee in le'eg ayay le'egtahay miisaanka laalaabida fudud ee kursiga curyaanka ee korontada? Ammaan ma u tahay waayeelka inay ku kaxeeyaan kursi curyaan oo koronto ah oo miisaankoodu fudud yahay? Waagii hore, kuraasta curyaamiinta ee korontada ku shaqeeya waxay inta badan isticmaalaan qaab dhismeedka tuubada birta iyo baytariga aashitada rasaasta, markaa miisaanka baabuurku waa weyn yahay, laalaabku maaha mid ku habboon, lama laabi karo kaydinta iyo qaadista. Horumarinta sayniska iyo tignoolajiyada, baahiyaha dadka waayeel......
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Gargaarka Socodka iyo Kursiga Curyaanka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Gargaarka Socodka iyo Kursiga Curyaanka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Gargaarka Socodka iyo Kursiga Curyaanka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.